I-Recipe Shchi ngamakhowe kunye neebhalile zebherele
Shchi kunye nama-mushroom kunye ne-pearl yebhali
Isobho seMushroom kunye ne-sauerkraut I-Russia ngaphandle kwe-cabbages yinto efanayo ne-Italy ngaphandle kwe-pasta. Yisimboli esifanayo somhlaba waseRashiya kunye nezithethe zaseRashiya, njenge-samovar, isonka se-rye okanye i-Tula ye-breadberry. Yaye yabonakala eRashiya kanye kunye nokufika kobuKristu, xa bekunye nenkolo entsha evela eByzantium, iklabishi yafika kummandla wethu. AmaSlav, ayeqhelekile ukugubha, ayewaxabisa kakhulu ngokubhekiselele kwimfuneko yokugcina iindawo zecawa eziliqela ngonyaka. Ngokuhamba kwexesha, ukusetyenziswa kwenyama, isobho se-mushroom kunye nezinye izitya zeklabishi sele zikhulile zibe yindlela yokuphila. Iingcali ezivela kwinombolo yecandelo lokutya malunga neentlobo ezilishumi eentlobo ezahlukeneyo zesobhobhaka: isisityebi, isinyameko kunye nenyama, intlanzi kunye nesobho se-mushroom, eluhlaza kunye nolomileyo, imihla ngemihla kunye ntsha ... Le ndlela ehlukahlukeneyo yenza ukuba isidlo sinqwenele njalo kwaye singabi nantoni, kungekho ngaphandle kwesizathu kwintsapho yaseRashiya kwakukho ilizwi : "Utata uya kuthuka, kodwa akaze afune." Isonka sangempela saseRashiya sipheka ngaphandle kwamazambane, asimangalisi, kuba le ngcambu yavela eRussia emva kweklabishi. Ngenxa yoko, ukutya, ngokukodwa kwimihla yokuzila, i-croup yongezwa kwisobho. Zama kwaye upheke isobho esinomsoco we-mushroom kunye ne-pearl yebhali, njengoko kwenza okhokho bethu.
Amakhowe, amhlophe, omisiwe, 25 g
Groats i-pearl ibhali 3 tbsp. l.
I-Celery ingcambu 200 g
Iklabishi emhlophe icunci 150 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela isobho se-mushroom, ufuna kwakhona i-pearl yebhalile, ingcambu ye-celery, iklabishi eyomuncu, izityalo kunye neziqholo.
Inyathelo 2 Ama-mushroom ahlambuluke kakuhle, uthele 1 indebe yamanzi abandayo kwaye ushiye imizuzu engama-30-40.
Inyathelo lesi-3 Gweba isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kwaye uthathe amacwecwe.
Inyathelo 4 Kwipani yokucoca, ukufudumeza ioli yendalo kunye ne-sauerkraut nge-celery. Fry phezu kokushisa okuphantsi kwemizuzu engama-15 ukuya kwe-20 phantsi kwesiqwenga.
Inyathelo lesi-5 Ukunyuswa kwama-mushroom kuluhlu lwe-napkin ye-tishu kwaye ulondoloze, kwaye ama-mushroom abuye abuye abuye. Thela ii-2 ilitha zamanzi ebhodweni, faka ama-mushroom, uhlambe i-pearl rump kunye ne-mushroom-infusion - ubeke yonke into ekubilisa, upheke ubushushu obuncinane kwiminithi engama-40.
Isinyathelo 6 Emva koko wongeza iklabishi echitshiweyo nge-celery - upheke enye imizuzu eyi-10.
Inyathelo 7 Hlanganisa ipararsley, ityuwa kunye nepilisi, ukunqumla, kwaye ususe ekushiseni. Makhele i-5-10 imizuzu.
Kish kunye neklabishi kunye neengcawa
Isaladi kunye ne-sauerkraut kunye ne-honey agarics
Isaladi ephuma kwiklabishi neentsimbi zebhendi
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - iSagittarius yabesifazane - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Iinkwenkwezi ezingenayo i-Photoshop
Ukupheka kwiitya eziphantsi kweekhalori
I-almond kunye ne dessert
Iingqengqengqele zomgubo ocoliweyo kunye noshizi kunye neetamatato ezomileyo zelanga
Amanzi okuhlamba okuhlamba
Indlela yokudala umfanekiso wakho omtsha
Yintoni enokuyenza ukuba umqeshi asayine ifayili yokulahla
Indlela yokupheka isaladi esimnandi kunye ne-shrimps
Umntu akanandaba nantoni na, ngaba kulungile ukuzama ukumnceda?